musha nyika dzakabatana WWE Superstars Bhiridha Goldberg Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Kutanga, ane zita remadunhurirwa rokuti "Nhema".
Yedu Bill Goldberg Biography inokupa chinyorwa chizere cheNyaya yake Yehudiki, Chokwadi cheMhuri, Vabereki uye Hupenyu hwepakutanga.
Kunyanya, Mararamiro aBill, Hupenyu hwepamwe uye zvimwe zviitiko zvinozivikanwa kubva paakanga ari mudiki kusvika pakuzivikanwa.
Hongu, munhu wose anoziva iye ndiye mumwe akakurumbira WWE superstars yenguva dzose. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveBill Goldberg's biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Bill Goldberg Yevacheche Nyaya:
Kutanga kubva, William Scott Goldberg akaberekwa pazuva re27th raZvita 1966 kuguta reTulsa muOklahoma, United States.
Ndiye gotwe pavana vana vakazvarwa naamai vake, Ethel Goldberg uye kuna baba vake, Jed Edwin Goldberg.
Kunyika yaBill yekuAmerica inozviratidza, asi mhuri yake yechiJudha, yeRussia neRomania inongozivikanwa kune vashoma.
Saizvozvo, havazi vazhinji vanoziva kuti mudiki Bill akakurira muguta rekuzvarwa - Tulsa padivi pevakoma vake vatatu vakuru Steve, Michael naBarbara.
Kukura muTulsa, mudiki Bill aive mwana wemitambo aine muviri wakasimba kuvaka. Nekuda kwekuvaka kwake, aive nezvaaifarira mukutamba nhabvu yekuAmerica kubva achiri mudiki uye akapihwa kutasva mabhiza asati ave nemakore mashanu ezera.
Kunyatsoongorora zvishuwo zvake zvehupenyu hwepakutanga kwaizoita kuti munhu atende kuti vabereki vaBill Goldberg vaive vanhu vanoita zvemitambo ASI izvo handizvo.
Bill Goldberg Nhoroondo Yemhuri:
Waizviziva here?… Vabereki vaBill Goldberg vaive vanhu vane hunyanzvi hwekuita basa vane basa rinosimudzira hutano hwakanaka / kuchengetedzeka pamwe nemimhanzi / kufarira. Kutanga nababa vaBill, aive Obstetrician uye Gynecologist.
Mumwe wevabereki vaBill Goldberg- amai vake vaive vayorini pamwe chete nemuchengeti wemaruva (horticulturist).
Kutenda kune vese vabereki vane hunyanzvi, Bill akakurira mumhuri yepakati-yemhuri mamiriro ekumisikidzwa nerudo rwese uye madhivhoti akakodzera chero mwana mudiki wemhuri.
Dzidzo yaBill Goldberg neBasa Kuvaka:
Kunyangwe aine mhuri isiri yemitambo uye ari wekupedzisira mwana (mucheche wemba), Bill akakurira muhungwaru achipesana nekuve akapambwa-wekupedzisira.
Kare kumashure, kuda kwake nhabvu uye kuda kwekuwana dzidzo yayo hakuna kumbozivikanwa kuderera.
Panguva yakaitwa Bill nedzidzo yake yechikoro chepamusoro, akawana bhezari yekutamba nhabvu yeYunivhesiti yeGeorgia Bulldogs timu yenhabvu.
Hazvina kutora nguva refu Bill asati akwanisa kunyorwa kwe1990 NFL uye akatorwa neLos Angeles Rams.
Bill akapedza mwaka mumwe chete achitambira Los Angeles Rams asati aenderera mberi nekuve neCFL Sacramento Gold Miners neAtlanta Falcons zvese pakati 1992-1994.
Ndichiri neAtlanta Falcons, Bill akawana kukuvara "kwakabvarura dumbu rake repazasi pachiuno". Nekudaro, akapedza mwedzi yakati wandei achipora.
Zvinosuruvarisa, Bill akange asiri chinhu chakakosha kuAtlanta Falcons. Nekudaro, ivo vakamucheka kubva kuchikwata.
Achienderera mberi, Bill akawira pasi pakusimudza simba uye kudzidziswa mumisanganiswa yemasoja pamberi pevamiriri vaviri vehunyanzvi (Lex Luger naSting) vakaona ndokumupa kukokwa kuti atange kudzidziswa muWrestling. Nekudaro, akatanga basa raBill rekuvaka muWrestling.
Bill Goldberg Bio - Makore Ekutanga MuWrestling:
Nguva yacho payakakwana, Bill akaita zvishanu zvinoyevedza pre-terevhizheni muWorld Championship Wrestling (WCW) pasi pezita rekuti "Bill Goridhe". Akazoenderera mberi nekuita rake rekutanga basa munaGunyana 5, 22 episode yeNitro.
Iyo Inokunda Streak:
Mushure mezvo, yaive mahwina mushure mekuhwina kweiyo Wrestling prodigy uyo WCW akatanga kungoreva se "Goldberg" pakati paKurume we1998.
Pamusoro pekuhwina kwake, Bill akaita zvakanaka kukunda Raven kuhwina United States Heavyweight Championship.
Hazvina kutora nguva refu asati ave murwi weWCW World Heavyweight Championship. Kushamisika kwevateveri, akahwina zita iri nekukunda Hulk Hogan muna Chikunguru 1998.
Zvinosuruvarisa kuti kuhwina kwaBill Goldberg kwakagumiswa pakuverenga zviri pamutemo kwe173–0. Zvisineyi, akakwanisa kuhwina mazita mushure.
Ivo vanosanganisira yake yechipiri WCW United States Heavyweight Championship zita pamwe neWCW World Tag Team Champion zita naBret Hart pamberi peWCW kuvharwa muna 2001.
Bill Goldberg Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Kutevera kuvhara kweWCW, Bill akatanga Wrestling yeiyo Yese Japan Pro Wrestling muna 2002 uye akabudirira zvikuru izvo zvakaita kuti WWF (yava kunzi WWE) itange kutaurirana kwechibvumirano naye.
Pakusina kusaina neWWE, Goldberg akange aine kuhwina feud naye Dombo ndokuenderera mberi nekuita kumwe kuhwina.
Nenguva isipi akatanga kukwikwidzana naye Triple H, achimupikisa kuWorld Heavyweight Championship asi akakundwa muna Nyamavhuvhu 2003.
Bill Goldberg Biography - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Hapana kana mumwe wekusiya, akapa iro dambudziko kumwezve kuyedza mumazuva mashoma uye akazove World Heavyweight Championship neasina kunyanyisa kunakidza kutonga kwemazuva makumi masere nemana.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora iyi Bill Goldberg's Biography, iye akanyatsoita mushe kuva mbiri nguva WWE Universal Champion.
Akatanga kuhwina nekukunda Kevin Owens mu2017 mushure mekuve kure neWWE kwemakore gumi nemaviri. Kechipiri, akahwina zita iri nekukunda Bray Wyatt muna Kukadzi 12.
Nekukunda uku, Bill akazove wekutanga kurwira kuhwina mukwikwidzi wepasirese mushure mekupinzwa muWWE Hall yeMukurumbira. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Musikana waBill Goldberg, Wife, uye Vana:
Achienderera kuhupenyu hwerudo hwaBill Goldberg, ari muhukama hwemhuri hunofadza neaimbova musikana wake uye iye zvino mudzimai- Wanda Ferraton.
Shiri dzerudo dzakatanga kufambidzana mu2005 mushure mekusangana pane seti yemuvhi - Santa's Slay (hongu, kuita nderimwe rebasa raBill).
Wanda aive musikana waBill kwemwedzi mishoma asati aita sarudzo yekusunga pfumo naye pa 10th yaApril 2005.
Vasati vasangana, Wanda aive nemukomana iye Bill aine musikana wake asi vakafanoona hukama kuti vangove murume nemukadzi. Vakaroorana mubatanidzwa wakakomborerwa nemwanakomana mumwe chete - Gage AJ Goldberg (akazvarwa muna Chivabvu 10, 2016).
Achitevera tsoka dzababa vake, Gage anoda kuve mutsimba. Zvisinei, Bill anozvirambidza. Iye anotosarudza kuti wechidiki aite basa kunze kwekutamba nhabvu yeAmerica kuitira kuti amubatsire kurarama zvakare zviroto zvake zvehucheche.
Bill Goldberg Hupenyu Hwemhuri:
Mhuri haina kukosha kunaBill Goldberg chete, ndizvo zvese kune mutsimba. Muchikamu chino, tichakuunzira zvimwe zvakawanda nezve nhengo dzemhuri dzaBill Goldberg kutanga nevabereki vake.
NezveBill Goldberg Baba:
Baba vaBill, Jed Edwin Goldberg, vakaberekwa musi we 16th waChikumi 1924. Aive chiremba ane hunyanzvi muObstetrics uye gynaecology.
Muchokwadi, Jed anozivikanwa kuve akaona kune kuendesa kwakachengeteka kweasina kushomeka zviuru gumi zvevacheche asati afa muna Chikunguru 10,000.
Kusvikira iye afa, Jed aive padyo kwazvo nevana vake kunyanya Bill uyo aizomubata mukuremekedzwa nekusingaperi. Izvi hazvinei nekuti ivo vese vabereki vakapatsanura nguva refu asati afa.
Bill Goldberg aine yakanaka nguva yemubatanidzwa nababa vake Jed Edwin Goldberg.
Zvimwe pane Bill Goldberg Amai:
Ethel Goldberg ndiamai vaBill. Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezvekuti paakazvarwa riini asi isu tinoziva kuti iye wekare muridzi wevisitiyani ane hunyanzvi hwekufarira mukurera kwemaruva.
Imwe yemhando dzayo dzakakurumbira ndeye kuhwina mihombe orchid iyo yaakasarudza kudaidza kuti Goldberg (mushure meBill). Iko kuvandudza kunoenda nenzira refu yekusimbisa hukama hwepedyo hwaanaro naBill.
Nezve Bill Goldberg Vanun'una:
Taura nezvehama dzaBill, ivo vese vakuru kwaari asi kwete semhasuru sezvaari. Tinotanga naSteve. Iye akazvarwa mu1954 uye anogara muSan Diego kwaanomhanyisa bhizinesi reresitorendi panguva yekunyora iyi bio.
Anotevera ndiMichael uyo akazvarwa muna 1949. Ane kirabhu yemimhanzi muMiami, anogadzirisa ndege uye anofarira mujaho dzechikepe.
Iye chete mwanasikana wemhuri yaBill Goldberg anoenda anonzi Barbara. Iye anogara kuCalifornia semukadzi kune anohwina mubairo / mutambi wenhau weESPN - Larr Burnett.
About Bill Goldberg Hama:
Kure kubva kumhuri yepedyo yaBill Goldberg, hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezvekwake, kunyanya sekuru vake nasekuru vane mhuri yeRussia, Romanian neyechiJuda midzi.
Saizvozvowo, hapana zvinyorwa zvevatete vewrestler, babamunini uye babamunini. Iko kusimudzira kunoenda kuyambuka Broad kune vazukuru vake nevaninina.
Bill Goldberg Hupenyu Hwega:
Ari kure nekuita kwake mu-mhete, Bill Goldberg ane chimiro chakakura chinoratidza hunhu hwevanhu vanosimudzira Capricorn sechiratidzo chavo chezodhiac. Chokwadi ndechekuti, anoshanda, anoongorora, ane chivimbo, uye ane mutoro.
Uye zvakare, Bill ane hunyanzvi pakukurukurirana kwevanhu uye kashoma kuburitsa chokwadi pamusoro pehupenyu hwake hwepachivande uye hwega. Kufarira kwake uye zvekuita zvinosanganisira kuona mafirimu, kutamba nhabvu yeAmerica uye kushandisa nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari.
Bill Goldberg Mararamiro:
Waizviziva here kuti Bill Goldberg ane mambure anodarika emadhora gumi nemana panguva yekunyora iyi biography? Akagadzira huwandu hwehupfumi ihwohwo kuburikidza neWrestling, kuita mafirimu, achishanda seyemutauri muvara mune yakasanganiswa martial arts (MMA) pamwe nekutsigira marangi.
Nekuda kweizvozvo, anofanirwa kurarama hupenyu hwoumbozha hunoonekwa pachena mune yake $ 3.2 mamirioni eSan Diego imba inogara pamusoro pe 28 maeka epasi.
Asides iine makamuri edeluxe uye mamiriro ezvivakwa zvehunyanzvi, imba yaBill Goldberg ine 20-mota garaji rinoshanda semusha kune ake akawanda exotic vintages, anotendeuka uye anomhanya mota.
Bill Goldberg Untold Chokwadi:
Chokwadi # 1 - Matatoo:
Wakanga uchiziva here kuti Bill Goldberg angori maviri ma tattoos kana muviri muviri? Imwe yematato inyanzvi yedzinza uye yakaenderera mberi nekuve yake Wrestling logo. Rimwe racho ibanda riri mukati merimwe ruoko rwake rwerudyi.
Chokwadi # 2 - Chii chinonzi Chitendero chaBill Goldberg:
Vabereki vaBill Goldberg vakamurera vachitevedzera dzidziso dzechitendero chechiJuda. Izvi zvinoreva kuti iye muJudha anoita.
Muchokwadi, anodada nekuudza nyika yeWrestling nezvekuti anokoshesa zvakadii kutenda kwake muchiJuda nekusarwisa Yom Kippur (zuva rekuregererwa).
Chokwadi # 3 - Screen Endeavors:
Sezvo isu takapa zano pakutanga, Bill mutambi uye mutambi weTV uyo ane anopfuura eimwe bhaisikopo uye akateedzana kuoneka kuzita rake.
Mamwe emafirimu aBill Goldberg anosanganisira Universal Soldier (1992), The Return (1999), Happy Madison (2005), The Long Yard (2005), The Celebrity Apprentice (Series) uye One of Us (Series).
TV Shows ine nhoroondo yekutambira kuzita rake ndiyo Speed ​​Channel Show - Bullrun uye Nhoroondo Channel Ratidza Zvinyorwa Zvinyorwa - Auto-Maniac.
Chokwadi # 4 - Bill Goldberg Kurasikirwa Ratio:
Wanga uchiziva here kuti Bill Goldberg ane imwe yeasina kurasika ratios munyika yewrestling?
Muchokwadi, akangorasikirwa ka5 chete mune rake rese basa (saFebruary 2020) uye varwi vakabudirira pakumukunda vanosanganisira Bret Hart, Kevin Nash, Triple H, Scott Steiner uye Booker T.
Chokwadi # 5 - Nezve rake Pfumo Kufambisa:
Tine chokwadi chekuziva kuti Bill haana kugadzira iro pfumo kufamba, asi iye zvine nharo anozviita zvirinani kupfuura chero mumwe mutsimba. Vapikisi vake havamudi iye achidhonza kufamba kunopesana navo asi Bill anonakidzwa nezvose zvacho!
Chokwadi # 6 - Kusvuta uye Kunwa:
Wrestler anoda zvekunwa zvine mutsindo uye anoita kunge asina kana chinhu chekusvuta. Izvi zvinopa kutenda kune chokwadi chekuti iye anoziva hutano uye anofarira hunyanzvi hwekugara wakasimba.
Ngatisakanganwe kuti mumwe wevabereki vaBill Goldberg (baba vake vanononoka) aive nyanzvi yehutano akarambidza chiitiko ichi.
Chokwadi # 7 - Kuda Mhuka:
Bill ane rudo rukuru kumhuka kunyanya kitsi uye haadye nyama. Kuti azadzise kururama kwese, murwi anoshanda anoshanda neAmerican Society for the Prevention of Cruelty to Animals.
CHOKWADI KUTI: Tinotenda nekuverenga yedu Bill Goldberg Childhood Story pamwe ne untold biography chokwadi.
Pahuduku biography, isu tinovavarira kuita chokwadi uye kururamisira. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingataridzike mune ino chinyorwa, ndapota isa mhinduro yako kana kutibata nesu.
Bill Goldberg's Biography (Wiki Inquiries)
Zita Chairo: William Scott Goldberg.
Zuva rekuzvarwa: Zvita 27 Zvita 1966 (makore makumi manomwe nemashanu senge muna Kurume, 53).
Nzvimbo yekuzvarirwa: Harare, Zimbabwe.
Mazita emazita: "Bill", "Da Man", "Iyo Iconic" uye "Ngano".
Vabereki: Ethel Goldberg (Amai), naJed Goldberg (Baba).
Hanzvadzi sikana: Barbara Goldberg.
Hama: Mike Goldberg naMike Goldberg.
Mukadzi: Wanda Ferraton (kubvira 2005).
Networth: Mamirioni gumi nemana (sepana Kurume 14).
Dzidzo: University of Georgia
Mabasa: Professional wrestler, mutambi, mutambi wenhabvu, akavhengana maratidziro emuvara wevara.
kukwirira: 6 ft 4 mu (193 cm.
Hupenyu hweMunhu hunhu: Inotarisirwa, inorangwa, kuzvidzora uye inyanzvi chaiyo ..